मोदीलाई चारघेरामा सुरक्षा, पहिलो घेरामा भारतीय कमान्डो - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
मोदीलाई चारघेरामा सुरक्षा, पहिलो घेरामा भारतीय कमान्डो
Published On : २८ बैशाख २०७५, शुक्रबार १०:१६
काठमाडौं । दुईदिने नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सुरक्षाका लागि काठमाडौंमा मात्रै १० हजार बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । नेपालका चारवटै सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीसहित १० हजार बराबर सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिन लागेको प्रहरी उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीको सुरक्षा चार घेरामा गरिने भएको छ ।
मोदी आफ्नै बुलेटप्रुफमा